Womenmụ nwanyị ndị nwere ụmụ mgbe ha gbara afọ 35 - Ezinụlọ
Womenmụ nwanyị 5 Na Ihe Mere Ha Ji Chere Havemụ ruo mgbe 35 gachara
5 Women Why They Waited Have Children Until After 35
Jụọ nwanyị ọ bụla tụụrụ ime karịa afọ 35 ma ha ga-agwa gị: Ọ bụ ihe ijuanya na ọ ga-eju anya mgbe ị na-abanye n'ime OB / GYN na-enwe mmetụta na-egbukepụ egbukepụ ma na-eto eto ma ha nye gị ya kasị njọ okwu ogwu mgbe ekere. ’Re bụ onye geriatric. Ọ bụ ya mere anyị ji jụọ ụmụ nwanyị ise ajụjụ banyere ahụmịhe ọmụmụ ha tupu oge ọmụmụ ha na ihe kpatara ha jiri chere kpọmkwem ruo oge nne dị elu inwe ụmụaka. Isi mmalite: Afọ-karịchaa n'afọ ime-bụ n'ezie ọnụọgụ.
Njikọ: Ebumnuche 5 Ọ bụ ihe dị ịtụnanya ịtụrụ ime Mgbe 35 gachara
Alụrụ m na 21 ma anyị maara mgbe niile na anyị ga-amalite ezinụlọ otu ụbọchị. Anyi buputara aha umu anyi. Ma n’ime afọ iri abụọ anyị, anyị gara ọtụtụ ebe wee na-asị, ‘Ọ D, MMA, nanị otu afọ ma anyị ga-ebido ezinụlọ.’ Na 30, anyị kwagara n’obodo m, zụta nnukwu ụlọ nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ ụra wee bido ịgba mbọ ezinụlọ.Ka ọnwa anọ gachara, ọ gwara m na ya na nwoke nwere mmekọ. Ọ hapụrụ ma ahụbeghị m ya kemgbe. Erere m ụlọ ahụ, kwakọba akpa m ma kwaga New York City maka mgbapụ, njem na ibi ndụ. Ozugbo m dị nkwadobe, amalitere m ịkpa ọzọ na 34. Site n'ike m niile, agbalịrị m izere ịkpọsa, 'Hi, ọ dị mma izute gị. Oge ndu m na aru n’ezie. 'M zutere di m mgbe m bụ 35 ma mara ozugbo na ọ bụ onye ahụ, otu, onye mkpụrụ obi m na onye mmekọ na mpụ. Anyị malitere ịchọ ezinụlọ nke enweghị ihe ịga nke ọma ma chọọ enyemaka infertility. Mgbe IUIs dara ada na otu IVF gara nke ọma, ada anyị bịara mgbe m bụ 39.
Oge ọ bụla m nụrụ ahịrịokwu ahụ 'ime ime agadi,' akpụkpọ ahụ m na-ama jijiji na obi ilu. Ozugbo m tụụrụ ime, enwere m mkpali ịbụ akụkụ nke 'òtù' nzuzo, otu òtù nzuzo nke ụmụ nwanyị na-ekere òkè na ahụmịhe na-agbanwe ndụ. Havenyere m akara mụ na ya mere ka m pụọ iche mere ka ọ dị m ka à jụrụ m ajụ. Anyị chọrọ ịnọ n'okpuru nlekọta nke midwife kama ịbụ OB / GYN. Mgbe m malitere omume anyị na-atụle, echere m na ọ dị mkpa ịkpọsa na m dị afọ iri atọ na itoolu ma jụọ ma nke ahụ ọ ga-abụ nsogbu n'ihi na m bụ 'ndị agadi.' Ha chịrị ọchị ma zaghachi, sị: 'Ọ bụrụ na anyị etinyere afọ 35 , anyị ga-enweghị ndị ọrịa! Ihe a bụ New York. ’Kemgbe ahụ, eleghachibeghị m anya azụ. Enwere m afọ ime magburu onwe ya na ịmụ nwa. Ugbu a, ana m etinye ụbọchị m niile na-ele nwa kacha zuru oke, mara mma, mara mma nke bịarutere na mbara ụwa. Adịghị m mma n’akụkụ, n’ezie. - Bethany, 40
Na 20s, enwere m ambivalent, mana echere m na m ga-achọ ịbụ nne tupu 30 ma ọ bụrụ na mụ na onye ọlụlụ m kpebiri na anyị chọrọ ụmụaka. Ma alụghị m di ruo mgbe m gbara afọ iri abụọ na asatọ ma di m bụ onye na-egwu egwu oge niile oge ahụ. Nke ahụ mere ka atụmatụ ezinaụlọ anyị nọrọ na njegharị ka anyị na-agagharị otu esi arụ ọrụ mmekọrịta n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ. Kidsmụaka abụghị ihe kacha mkpa. Na 35, anyị kpebiri na anyị ejighị n'aka, mana enwere ike ịnwale. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị nrụgide onwe onye na ndị ezinụlọ gbasaruru batara n'ime egwuregwu gụnyere ọtụtụ ọnwụ, ịchọpụta na nne di m nwere isi mgbaka nke mere ka m bụrụ onye na-elekọta ya na ụfọdụ nsogbu ahụike nke m. Oh! M na-arụ ọrụ oge niile. Ọgwụ m riri ihe dị ka otu afọ adịghị mma ma ọ bụrụ na m na-eme atụmatụ ịtụrụ ime. Aghọtara m eziokwu na ịbụ nne na nna nwere ike ọ gaghị abụ n'ọdịnihu m. Otu afọ mgbe e mesịrị, enwere m ike ịpụ na meds, nne di m nọ n'ọnọdụ ọhụrụ yana enwere m ahụike dị ọcha, yabụ mụ na di m kpebiri ka ọ dịkarịa ala iji nweta ngwaahịa ma hụ dọkịta ọmụmụ. Anyị tụlere banyere ohere nke iji mmemme dị iche iche iji mee ka usoro a dịkwuo ngwa kemgbe m nọ na-echegbu onwe m gbasara afọ ndụ m, mana m nwere ndị dọkịta gwara m na 37 ka bụ nwata ma ghara ichegbu onwe ya.
Amara m banyere aha 'geriatric', mana amatakwara m ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ga-enwe ụmụ ma emesịa na ihe niile dịịrị ha na ụmụ ha mma. N'ihi ya, m gbalịrị iwepụ aha ahụ n'onwe m. Anọ m na ezigbo mma ma dị mma mgbe anyị mechara tụrụ ime na 38-yana, dabara nke ọma, mgbe ndị otu di m lara ezumike nká-ndị otu dọkịta m gwara m na ọkwa m niile dịka m siri ike dịka onye dị afọ iri abụọ. Echere m na afọ ndụ m mere ka afọ ime ahụ sie ike karị, ọ bụ ezie. Enweghị m oge dị oke mfe na ya, mana n'aka nke ọzọ, enwere m mmetụta nke ịbụ isi ike ugbu a na nwa m nwoke nọ ebe a. Yabụ, enwere ọtụtụ mgbago na mgbada n'ụzọ ọbịbịa ya, mana enwere m nnukwu ekele na anyị nọ ebe a ugbu a. Amaghịkwa m otú m ga-esi nwee mmasị ịbụ nne. - Erica , 39
Achọrọ m ịbụ nne mgbe niile, mana o were m oge ịchọta 'onye' m, n'ihi ya amalitere m ịmalite obere oge na usoro ahụ dum karịa ka m chere. Di m tọrọ m karịa, n'ihi ya, anyị kpebiri ịmụ nwa obere oge karịa ka ọ gaara ezube, ọ dabere na m na-eche na elekere m na-akụ. Ọ bụ 29 na m bụ 35 na anyị lụrụ di na nwunye ihe karịrị otu afọ mgbe anyị malitere ịnwale. Emechara m nweta ule ime afọ ime dị mma, ihe dị ka otu afọ mgbe m nwesịrị nnwale na eserese na iwepụta oge na tincture na ihe niile ahụ. Mgbe ahụ, ime pụrụ m ka otu izu gachara. Agwala m mama m, kwa, n'ihi na enweghị m ike ịnwe mkpali m. Mgbe nke ahụ gasịrị, ime ọzọ — ime pụrụ ọzọ — ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ ahụ kpọmkwem ka ọnwa anọ gasịrị, n'ụzọ dị mwute. Enwere m obi abụọ inwe obi ụtọ nke ugboro abụọ, mana m ka kwere na ya. O siiri m ike karịa ka m tụrụ anya na ọ ga-abụ, n’agbanyeghị na m gbalịrị ịkwadebe onwe m maka ihe nwere ike ime. Na nkwanye isi nke onye na-edozi isi m - hey, gịnị ka m ga-atụfu n'oge a? —Emere m ọgwụ m nyere m iji nyere m aka ịtụrụ ime ma amalitere m ịme acupuncture mgbe niile, rie anụ na-acha uhie uhie na bọta ma gbalịa ka ihe mee ka ha si mee. Atụrụ imeọnwa anọ ka e mesịrị!
Enwere m ụmụ nwanyị na-ele ime mara mma kachasị mma, bụ ndị na-akpọtụbeghị m ndị agadi. Ha elekwasịghị anya na ya na echiche ha bụ naanị ndị metụtara m. Enwere m ọtụtụ nchegbu banyere ịka nká. Achọrọ m ka nwa m gbakee dịka o kwere mee ma achọrọ m ịdị jụụ, nwa agbọghọ na-eto eto. M nwekwara ike ịchọ karịa otu nwatakịrị ma ọ bụchaghị na ha chọrọ ka ha bụrụ ụmụ ejima Irish, ya mere akara 'geriatric' na-emetụta nnukwu nrụgide n'ihi na ọ bụ mkpebi dị oke mkpa. N'okpuru ala: O doro anya na ọ bụghị ihe m na-echegbu onwe m na mmalite nke 20s. - Barbara, dị afọ 37
Echeghị m ịmụ ụmụ, naanị m na-eche mgbe niile na m ga-enwe ha mgbe ọ bụla m chọrọ. Alụrụ m na 33 ma na-arụsi ọrụ ike na ọrụ m. Mgbe anyị lụrụ, anyị tụlere ụmụaka wee kpebie na anyị ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ mee, mana ọ bụghị mgbe ọ bụla ọ ga-abụ nrọ ndụ. N'ezie, mgbe anyị na-atụle ọdịnihu, ọ na-abụkarị metụtara ọrụ ma ọ bụ gbasara nkọwa nke njem ọzọ anyị. Mgbe m gbara afọ iri atọ na isii, papa m — onye na-ekwu okwu n’olu dị nro ma na-ajụkarị ajụjụ ọnụ — jụrụ m banyere ụmụaka. Ọ iji nkwanye ùgwù kwuru na m na-akawanye nká nakwa na, ọ bụ ezie na ọ maara na m na-arụsi ọrụ m ike, ekwesịghị m ịhapụ inwe ọ joyụ kachasị ukwuu nke ndụ nke ịmụ nwa. N'otu oge ahụ, di m malitere iweta ya. Ọ bụ n'ezie oge mbụ m tụlere afọ ndụ m na ime ka nke a mee. Oge ndu bu mgbe a echiche m n'obi ma ọ bụ a nchegbu. Anyị gbalịrị otu afọ, gaa n'ụlọ ọgwụ ọmụmụ na anyị abụọ nyochara, yabụ anyị hapụrụ ya n'aka Chineke. Ọ bụrụ na enweghị m nwa, enwere m afọ ojuju na ndụ m na obi ụtọ. Adị m ime mgbe m dị afọ 38.
Afọ m na-arị elu mgbe ọ bụla m gara dọkịta. Ọtụtụ ndị nne na-amụ nwa nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'afọ ahụ, ya mere, a na-ele m anya ka m nwee nwa mbụ m mgbe m dị afọ 38. A gwara m na ahụ siri m ike na nyocha m gụrụ dị ka nke onye dị afọ 33. Nke ahụ mere ka ahụ dị m mma karịa ma ahọrọ m ịghara ịnwale ule niile enyere ndị nne ochie. Naanị m chọrọ ịhapụ ọdịdị ka ọ na-agba ọsọ ya. Nwa m nwoke gbara afọ iri na atọ n’ọnwa Nọvemba a. Adị m afọ iri ise ugbu a. - Lauren, onye dị afọ 50
Echeghị m na m ga-alụ di ma ọlị ruo mgbe m zutere di m na 33. Ọ bụghị naanị na ọ dị afọ asaa karịa m, o wepụtara oge ya ịza ajụjụ ahụ. Mgbe ahụ, anyị chọrọ ịlụ di na nwunye ruo otu afọ tupu ụmụaka. Mgbe anyị mechara malite ịtụrụ ime, ọ bụ ihe ịma aka ịtụrụ ime, mana mgbe anyị hụrụ onye ọkachamara n’ihe banyere ọmụmụ, ọ bịara bụrụ na nsogbu ya bụ nke ya, ọ bụghị nke m. Gbakwunye na m bụ nwanyị na-arụ ọrụ na amaghị m n'ezie ma m ga-enwe nwa ruo mgbe m zutere ya. Nke ahụ bụ mgbe m dị mkpa n'ịchọ ezinụlọ, kwa. O were m oge, mana m mechara mụọ nwa m nwaanyị mgbe m dị afọ iri anọ na otu.
Onwebeghi onye kpọtụrụ m okwu ahụ 'ime ime nwa'. Adịghị m enwe nnukwu ihe ize ndụ. Arịrịrịrịrị m ka m gaa hụ dọkịta dị oke egwu ma OB / GYN m gwara m na ọ bụ ihe na-adịghị mkpa na nke ahụ, ọbụlagodi mgbe m dị afọ, mgbe m mere nyocha mkpụrụ ndụ ihe nketa ọ bụla, ọ gwara m ka m ghara ichegbu onwe m. M na-emega ahụ kwa ụbọchị ma nri m dị ezigbo mma tupu ịtụrụ ime. Abụ m nwanyị gbasiri ike. Okwu a dighi ndu m. - Olivia, 45
Njikọ: Sayensị Na-ekwu * Nke A Bụ Afọ Zuru Oke Iji Nwee Kidsmụaka
see okwu maka ụbọchị nne
ladies ntutu ntutu
egwuregwu maka nnọkọ maka ndị okenye
na-egosi dị ka jane nwa agbọghọ na-amaghị nwoke
ịkpụ ntutu maka ihu dị iche iche